I-china Hot Selling 15mm Dual Action Polisher 900W Car Detailing Machine wokupholisha i-X15 abakhiqizi nabaphakeli | IChecheng
Ukuthengisa Okushisayo 15mm Dual Action Polisher 900W Car Detailing Machine wokucwebezelisa X15
Into NO.: CHE-X15
Umshini wethu wokupholisha imoto weX15 kulula kakhulu ukuwusebenzisa futhi ungasusa imihuzuko ngemiphumela yobungcweti. Ukujiya kanye namagiya alesi sitholi semoto esibhakabhakeni kuqinisiwe futhi kunika amandla no-20% ukwanda kwamandla nokumelana. Amandla we-900W anamandla ngamandla ngopende ohlanganiswe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lo mshini wokupholisha ngokuzenzakalela usebenzisa i-CNC ngokunemba okwenziwe ngomshini we-Steel counterweight ne-Japanese NSK bearings, enikeza ukuqina okukhulu kwe-80%. Iningi lemishini esemakethe ine-Zn counterweight ekhubazeka ngokushesha okukhulu, uma isetshenziswa ngobunyoninco, yakhululeka yalahlekelwa amandla okusika. Ukulawulwa kwejubane okusebenza ngesithupha kunikeza ukulawulwa kwejubane okuguquguqukayo kusuka ku-1800 kuye ku-4800 OPM, kungenza imoto yakho yansuku zonke enemininingwane isebenze kahle futhi ibe lula.
1pc 5in ipuleti elisekelayo, 1pc ukusonta, 1pc D-isibambo, 1pc imanuwali, 1pr carbon ibhulashi, 1pr isikulufa + Washer
I-1.Ihlonywe ngamabhere waseJapan NSK kanye ne-CNC ngobuciko obenziwe ngomshini we-STEEL counterweight, iyenza ilinganise kahle futhi iqine kakhulu.
2.Imoto enamandla engu-900W isusa ngempumelelo ukukhubazeka ngokushesha futhi ithuthukise isicwebezelisi sopende.
3.Smooth futhi olinganiselayo kahle.
I-4.Big orbit, esebenza kahle kakhulu ekupholiseni imoto
Ukusetha nge-6-speed control.
6.Soft iraba ukubambelela camera futhi isibambo, ngokunethezeka.
7.Amachweba ohlangothi lwekhabhoni enza abasebenzisi kube lula ukushintsha ibhulashi lekhabhoni.
Langaphambilini I-12mm 900W Orbital Car Wax Buffer Random Auto Polish Machine X12
Olandelayo: I-6 Inch Variable Speed ​​21mm Random Car Polish Buffing Machine X21